TvOS Beta Inoratidza Mamwe Mazano Nezve Nyowani 120Hz Apple TV | Ndinobva mac
Iyo itsva beta vhezheni yeTVOS yakavhurwa mazuva mashoma apfuura iri kuratidza imwe data nezve zvingangoita kuuya kwechigadzirwa chitsva kana zvirinani izvi zvinoratidzwa mune akasiyana midhiya senge, 9to5Mac. Mune ino kesi izvo zvandinoziva sampuro mukodhi yemukati yeiyi yazvino beta vhezheni Iko kunogona kusvika kwechigadzirwa chitsva uye tichaona kuti sei.
Zvinotaridzwa ne beta ndezvekuti iyo nyowani yekushandisa ine mareferenzi akati wandei kuenderana kweApple TV pa120Hz uye izvi zvinoitika kuvhura mudziyo mutsva kubvira HDMI 2.1 chiteshi chinodikanwa kuti uwane 120Hz mhando uye iyo yazvino modhi inotakura iyo HDMI 2.0 chiteshi.
Iyo HDMI 2.0 chiteshi iyo ichangoburwa Apple TV modhi iri kubva muna 2017, saka zvingave zvakanaka kana zvirinani kana pasina shanduko dzakakosha, iyo Hardware inogadziridzwa zvishoma, kunyangwe mumachiteshi. Izvi zvinogona kuve zvinopfuura chikonzero chakaringana chevamwe vashandisi kufunga nezve kutenga chishandiso. Nhasi harisi zano rakanaka kuzviita kunze kwekunge uchida AirPlay neterevhizheni yekare isingape mukana. Uye ndezvekuti materevhizheni aripo anopa iyi sarudzo uye akawedzera kune chokwadi chekuti vazhinji zvakare vane Apple TV + app, ipapo zvikonzero zvishoma zvasara kutenga Apple TV nyowani.
Pakusvika kweApple TV nyowani isu tanga tichitaura nguva refu yapfuura uye pamwe Apple's set-yepamusoro bhokisi ichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kuti ivhurwe kubvira izvozvi izvo zvaunofanirwa kuita kuona iPad nyowani, asi neApple haungazive. Kune rimwe divi, zvakakosha kuti utaure kuti zvakafanira kuti iyo TV kana yekutarisa iyo yakabatana neApple TV inopa rutsigiro rweaya 120Hz, kana isingabatsire.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » TvOS beta inoratidza zvimwe zvinoratidza nezve Apple TV nyowani pa120Hz